Top Media News - "သမီးေလး - သို႔" - Page 157 of 164 - ေန႔စဥ္သတင္းမွန္မ်ားကိုတင္ဆက္ေပးသည္ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာဖတ္ရႈႏိုင္ပါၿပီ
မကွေးတိုင်း မြို့နယ် (၃) ခု၌ နှစ်ရက်အတွင်း ခိုးဝင်၂၁ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့
မေကြးတိုင္း ျမိဳ႕နယ္ (၃) ခု၌ ႏွစ္ရက္အတြင္း ခိုးဝင္၂၁ဦး ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မင္းလွ ၊ မင္းတုန္း ႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ႏွစ္ရက္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္ မွ အေထာက္အထားမဲ့ဝင္ေရာက္လာသူ ဘဂၤါလီ (၂၁)ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ၊ ျပည္သူမ်ား စုေပါင္းအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႕၌ …
မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့
မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့ Unicode မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့ တစ်ယောက်ထဲလည်း နေတတ်အောင်နေပါ… မင်း စိတ်ညစ်နေလား_? ငါ ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပီး ကိုယ့်ဖာသာကို ပြန်ထိန်းပါ။ ဘဝအတွက် လေ့လာသင်ယူပါ စာများများဖတ်ပါသူများကို သွားပြောတာထက် အများကြီးသာတယ်။ မင်း ဝမ်းနည်းနေလား_? ခဏလောက် အားရပါးရ ငိုချပစ်လိုက်ပါ။ဘယ်သူ့မှ ပြောမနေနဲ့ ပိုးပြီးမျက်ရည်ကျအောင် လုပ်မဲ့သူပဲရှိတယ်။ …
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ပဲခူးတိုင်း ညောင်လေးပင်မြို့ အင်းတကော်ရွာအနီးတွင် စုံတွဲတတွဲသည် လဲကျသေဆုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့်
ခ်စ္သူမ်ားေန႔တြင္ ခ်ိန္းေတြ႕သည့္စုံတြဲ ေႁမြေပါက္ခံရၿပီးေသဆုံး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ပဲခူးတိုင္း ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ့ အင္းတေကာ္ရြာအနီးတြင္ စုံတြဲတတြဲသည္ လဲက်ေသဆုံးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ နယ္ေျမမွူးဦးသန္းေဌး သြားေရာက္ၾကည့္ရွု့ စစ္ေဆးခဲ့ရာ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္သူ စိုးသန္းေအာင္ (အင္းတေကာ္ရြာ) ၏ ေျပာျပခ်က္အရ မနက္၁၀နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ တဖက္ရြာသို့ ႏွမ္းဖိုးေတာင္းရန္ထြက္လာစဥ္ အင္းတေကာ္ရြာႏွင့္ ၂မိုင္ခန္႔အကြာ ျခဳံပုတ္ၾကားထဲတြင္ စုံတြဲတတြဲခ်ိန္းေတြ႕ေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္ရွု့ခဲ့ေၾကာင္း ခ်စ္ရည္လူးေနခ်ိန္ အနီးရွိတြင္းထဲက …
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအသောက် (၉)မျိုး
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအသောက် (၉)မျိုး Unicode ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအသောက် (၉)မျိုး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ အထူးသတိပြု ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအသောက် (၉)မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီအစားအသောက်တွေ မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရှောင်နိုင်တာကြေင့်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာ စားသောက်မိရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း ဒါမှမဟုတ် မသန်မစွမ်းကလေးငယ်တွေ မွေးဖွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သားသမီးကို ချစ်ခင်သနားရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားစဉ်ကာလအတွင်းမှာ …
အိမ်နေရင်းအဝတ်အစားနဲ့ အပြင်ထွက်တုန်း လက်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့ Surprises လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဖွေးဖွေး
Unicode အိမ်နေရင်းအဝတ်အစားနဲ့ အပြင်ထွက်တုန်း လက်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့ Surprises လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဖွေးဖွေး နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးက ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးပါပဲ။ သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် အနုပညာသက်တမ်း ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ အကယ်ဒမီဆုကြီး သုံးဆုတိတိကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက အခုလက်ရှိမှာလဲ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ မနေ့က …
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း Unicode နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း ” ခွဲစိတ်ရင် (၁၀) သိန်းအထက်ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြား မှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း “ နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ ဆေးများသောက်သော်လည်း …
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွေ့လာတော့မယ့် ဇီယက်ချ်
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွေ့လာတော့မယ့် ဇီယက်ချ် အေဂျက်အသင်းဟာ ယနေ့ညမှာပဲ လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်မှာ တောင်ပံ ကစားသမား ဟာကင် ဇီယက်ချ်ကို ချဲလ်ဆီးအသင်းဆီ ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ တွစ်တာမှာ အတည်ပြု ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ ညာတောင်ပံ ကစားသမား ဇီယက်ချ်ဟာ လက်ရှိ ရာသီကုန်အထိ အဂျက်အသင်းမှာပဲ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး …
မိတ်ဆွေများရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆီးချိုဖြစ် တဲ့လူရှိခဲ့ရင် ကူညီပြီးပြောပေးကြပါ
Unicode မိတ်ဆွေများရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆီးချိုဖြစ် တဲ့လူရှိခဲ့ရင် ကူညီပြီးပြောပေးကြပါ အင်မတန်မှ လွယ်သူတဲ့ နည်းလေးပါ။ ဆီးချိုဖြစ်လို့ မန္တလေးဆေးရုံကြီးကို သွားရောက်ပြပါတယ်။ အထူးကုသမားတော်ကြီးက ဆရာဝန်ကြီး ဦးထွန်းတင် (ယခု ဆရာကြီး ကွယ်လွန် ) ဆေးပညာရှင်များအထူးလေးစားရသည် ဆရာကြီး ဖြစ်ပါသည် ။ ဆရာဝန်ကြီးဟာ ခေတ်ပေါ်နည်းများမှာ အထူးကု ဖြစ်သလို ရှေးမြန်မာ ဆေးပညာကို ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ …
အိုလံပစ်ပွဲကြောင့် လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့လာမယ့်ရာသီ အဖွင့်ပွဲတွေကို လွဲချော်ရတော့မယ့် ဆာလာ
အိုလံပစ်ပွဲကြောင့် လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့လာမယ့်ရာသီ အဖွင့်ပွဲတွေကို လွဲချော်ရတော့မယ့် ဆာလာ လာမယ့် ဇွန်လအတွင်းမှာ စတင်ကျင်းပသွားတော့မယ့် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဂျပန်တိုကျို အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ အာဖရိကကိုယ်စားပြုအဖြစ် အီဂျစ်ယူ-၂၃အသင်းမှာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ အသက်၂၃နှစ်အောက် အီဂျစ်လူငယ်ကစားသမားလေးတွေအပြင် ပြိုင်ပွဲရဲ့စည်းမျဉ်းအရ စီနီယာကစားသမား၃ယောက်ကို ခေါ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဒီကစားသမားတွေထဲမှာ အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်စားသမား မိုဟာမက်ဆာလာကို ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ သေချာနေတာကြောင့် ဆာလာအနေနဲ့ လာမယ့်ရာသီအတွင်း လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ရာသီအစပွဲစဉ်တွေကို လွဲချော်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Photo Credit …
မြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့် ၁၃ ခုနှင့် စာမျက်နှာ ၁၀ ခုဖယ်ရှားခံရ
မြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့် ၁၃ ခုနှင့် စာမျက်နှာ ၁၀ ခုဖယ်ရှားခံရ စစ်မှန်မှုမရှိတဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်တဲ့ မြန်မာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက် အကောင့် ၁၃ခုနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာ ၁၀ခုကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီကနေ ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ်မှာ အခြေစိုက်ကာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာပြည်ကို ဦးတည်ပြီး အုပ်စုဖွဲ့ မမှန်မကန်လုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီး အကောင့် Follower …